Ihowuliseyili Iibhodi zeplastiki amaqhekeza isiko ngeenxa zonke zeplastiki idisk acrylic ezimibalabala akwazi ukugcina zeplastiki ngumenzi kunye nabenzi Kylin
Ibhodi yomdlalo weplastiki ngamaqhekeza esiko ejikeleze ii-disc ze-acrylic disc ezimibalabala
Iplastikhi ye-acrylic disc, sinokumkela iintlobo ezahlukeneyo, ubukhulu, ii-logo ngokwezifiso.
Iidiski $ 0.05- $ 0.10 / pc
Ubungakanani 12mm / 15mm / 18mm / 22mm / 40mm dia
Ukuba unayo nayiphi na ingxaki malunga nomdlalo webhodi njengemathiriyeli, imilo yecandelo, umbala kunye nobukhulu, inkqubo yokuprinta, ukubumba kweplastiki njalo njalo, pls Nxibelelana neentengiso zethu ezinamava kunye neqela lobugcisa. Ukuba ufuna sikuncede wenze umdlalo wakho, sinokubonelela ngenkxaso yoyilo esekwe kumava ethu.Bona iinkcukacha.
Singumvelisi oqeqeshiweyo womdlalo webhodi, umdlalo wekhadi, iipuzzle zejigsaw njalo njalo. Sikwibhodi yomdlalo webhodi ngaphezulu kweshumi leminyaka. Ngexabiso lokukhuphisana, umgangatho ophezulu, ukuhanjiswa ngokukhawuleza, kunye nenkonzo enhle, sinokufumana inethiwekhi yokuthengisa jikelele.
Abazithobileyo bamkela abathengi abavela kuyo yonke indawo ukuseka ukusebenzisana nathi ixesha elide.
Enkosi, izinto ezikumgangatho ophezulu kwaye yile nto besiyifuna. Ngelishwa, kuninzi okutshintshileyo (ngenxa ye-COVID-19) okwangoku. Iprojekthi ebesizimisele ukuyibona sele ibone utshintsho kwaye asizukufuna ezinye izinto okwangoku. Kodwa siza kukugcina engqondweni njengomthengisi ophambili. ”
-Timo Multamaki, eFinland
Eli ibilixesha lethu lokuqala uku-odola kunye nalo mboneleli, kwaye bebeluncedo kakhulu kwaye bezimisele ukuphendula imibuzo nokuthumela iifoto zemveliso ngaphambi kokuba kufakwe iodolo. Imveliso yayinxibelelana ngokuchanekileyo, kwaye ifike ngexesha, kwakumnandi ukwenza ishishini nabo. ”
-Steven Cook, eUnited States
Egqithileyo Ingqekembe yemidlalo yeplastikhi yesiko ethengisa ihowuliseyili yemali yebhodi yemali
Okulandelayo: umdlalo siko ityhubhu block lehoseyile zeplastiki ezimibalabala umdlalo
Wooden uhombiso iziqwenga umdlalo siko lehoseyile ...
Ibhodi yebhodi yebhodi yebhokisi yebhokisi yebhokisi yebhokisi yebhokisi yebhodi ...
Hayibo chips kumthengisi ibhodi isiko umdlalo eyongezwayo ...
B-008 ibhodi umdlalo abavakalisi siko umdlalo ikhadi bo ...
IBhodi umdlalo mveliso iphazili umdlalo lehoseyile ngomthi ...
Ikhadi lemikhono, Amakhadi okuQinisekiswa kuMgcini weenkuni, Amakhadi okudlala aqhelekileyo, Ukudlala okushicilelweyo okuqhelekileyo, Idayisi yesiNtu, Amalaphu Umdlalo weBhodi,